Guddi Baarayaal ah oo aysan Wasiiro ku jirin oo tagay Bariire iyo Ciidankii wax xasuuqay oo illaalinaya Amniga Guddiga. – Hornafrik Media Network
Guddi Baarayaal ah oo aysan Wasiiro ku jirin oo tagay Bariire iyo Ciidankii wax xasuuqay oo illaalinaya Amniga Guddiga.
Guddi Baarayaal ah oo ka socda Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sidda ee Somalia iyo Xarunta Baarista Dambiyadda Booliska ee CID ayaa gaaray Deegaanka Bariire ee Shabeeladda Hoose. Waxaana halkaasi ay ka billaabeen baarista la xiriirta Xasuuqii ka dhacay Beer ku taala Deegaankaasi.
Gaashaanle Dhexe Axmad Jiinoow-Ku Simaha Xeer Illaalinta Maxkamadda Ciidamadda ayaa hogaaminaya Baarayaasha tagay Bariire, Waxayna isla maantaba billaabeen inay waraysiyo la yeeshaan Dadkii Deegaanka Bariire, kuwaas oo ay wax ka waydiinayaan sidii ay wax uga dhaceen Deegaankaasi.
Baarayaasha u tagay Xaqiiqo raadinta Bariire ayaa amnigooda waxaa sugaya isla Ciidamaddii Xasuuqa u gaystay Dadka Shacabka ah ee lagu laayay halkaasi, taasoo shaki galin karta Natiijadda Baarayaaasha. Waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa in Baarayaasha iyo dadka Xogta saxda ah haya in la kala qariyo oo ay dhici karto in lala kulansiiyo Dad gaar ah oo ay diyaarsadeen Kooxda Wax xasuuqday oo Deegaankaasi xukuma.
Guddi Wasiiro ah oo loo xilsaaray inay soo baaraan arrinta Bariire ayaa diiday inay tagaan halkaasi sababo la xiriira Cabsi ay ka qabaan Deegaankaasi, Waxaana loo xayirnaa illaa iyo shalay inay tagaan Deegaanka, balse waxay ugu dambayn maanta iyagoo guryahooda jiifa u sheegeen Warbaahinta Dowladda Somalia inay u ambabaxeen Bariire. taasoo ay ogaatay HornAfrik inaysan waxba ka jirin oo ay Wasiiradda joogaan Muqdisho.
Dowladda Somalia oo rabta inay awood u adeegsato aasidda Maydadka Dadkii lagu xasuuqay Bariire, Akhriso Amarka Dowladda.